ISKU-XIDHKA AQALKA "LAYING": SHARAXAAD, SAWIR, DABEECADO, NOOCYO, SIDA LOO ISTICMAALO, BARISTA - KUFSI
Qaababka Isticmaalka Hibo-marinta Hoyga "Lay"
Maanta, suuqyada gudaha waxay bixiyaan noocyo badan oo ah noocyo kala duwan oo isweydaaris ah, labadaba Ruush-sameynta iyo dibedda laga keeno. Shimbiraha hibada leh waa ganacsi masuul ah oo u baahan aqoon iyo qalab habboon. Maadaama beeraha digaaga badani ay yiraahdaan, midna waa inuusan ku dadaaleynin inuu iibsado iskubarro qaali ah oo qaali ah, maadaama ay jiraan waxyaabo tayo sare leh. Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa warshadaha guryaha ee Ruushka "Neuska Bi-1" iyo "Neseka Bi-2".
Kombiyuutarada "Laying": qalab iyo qalab
Qalabaynta "Laying" waxaa loogu talagalay in lagu tarbiyo faraca bacaha, ducks, pheasants, digaagga, iwm. Kiiska qalabka waxaa laga sameeyaa caag xumbo ah, taas oo ka dhigaysa miisaan fudud, la qaadsiin karo, isla mar ahaantaana, waxay leeyihiin rinjiyeyn heerkul fiican leh. Qalab kasta oo ka mid ah waxaa lagu qalabeeyaa daaqad si aad u aragto weelka, uumi-baxaha, mitirka heer-kulka, dhakhtarka maskaxda. Qaar ka mid ah qodobadaasi waxay ku kala duwanaan karaan isbeddel iyadoo ku xiran nooca farsamo-yaqaanada.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan sida kuleyliyaha: Blitz, Cinderella, Dhalinta ideal, iyo sidoo kale sida loo sameeyo guri digaag ah, coop chicken iyo kiniin ka soo qaboojiyaha
Autoincubators noocan ah waxaa laga helaa laba nooc: 36 iyo 63 ukun. Nooca yar ee kartida leh waxaa lagu qalabeeyaa nalalka laydhka, nooca Bi-1-63 wuxuu isticmaalaa walxaha kuleyliyaha gaarka ah. Isbedelka heerkulka gudaha waa mid aad u fudud: ujeedadaas, heerkulbeeg gaar ah ayaa lagu dhisaa kuleylaha. Intaa waxaa dheer, labada nooc ee Bi-1 waxay ku qalabeeyeen hawsha qashinka ukunta.
Ma taqaanaa? Masaarida qadiimiga ah, qiyaastii 3000 sano ka hor, waxay isku dayeen inay dhisaan kulaylka shimbiraha.
Qeybta "Layer Bi-1" wuxuu leeyahay nafsoolitir (daaweynta qoyaanka) iyo heerkulbeeg (heerkulka cabbirka). Labada ka mid ah dareemayaashaas waxay leeyihiin nidaam muujinaysa xogta dhijitaalka ah (kaliya ee ku jira noocyo cusub oo ah kuwa wacyigelinta). Qaabab kasta oo ka mid ah kuwa cusub ee Novosibirsk-soo-saarayaasha waxay ku shaqeeyaan batari 12-watt ah. Xaaladaha caadiga ah, wuxuu kobcinta ku shaqeyn karaa 20 saacadood.
Farqiga ugu weyn ee udhexeeya wadaagga Bi-1 iyo Bi-2 waa mugga weelka ukunta. Nooca labaad ayaa loogu talagalay in uu soo saaro tiro badan oo ah shimbiraha hal nidaam. Isboortiga baabuurta leh ee loo yaqaan "2" waxay leeyihiin laba kala duwan oo la xiriira qolka: 77 iyo 104 ukun.
Isku-xidhka tooska ah "Layer Bi-2" wuxuu ku qalabaysan yahay heerkul aad u awood badan oo heerkulku kor u kaco kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku hayso heerkulaad joogto ah inta lagu jiro mugga. Qalabka heerkulka ee aaladda kama badan karo kan la oggol yahay 0.2 ° C. Wixii farcan ee digaaga, ukumaha kuwaas oo ay leeyihiin qiyaasta aan caadiga ahayn, waxaad isticmaali kartaa kala qaybiyayaasha qashinka gaarka ah. Tilmaamahan qalabka gudaha ee habka socodsiinta ayaa isticmaalaya 40 watts.
Shirkadda Novosibirsk waxay sidoo kale soo bandhigtay macaamiisheeda oo ah mashiinka "Copper Bi-2A". Waxay ku qalabaysan tahay heerkulbeegga dhijitalka ah iyo dhakhtarka maskaxda, laakiin waxaa ku shaqeeya batoon 60 watt. Intaas waxaa sii dheer, Bi-2A waxaa lagu qalabeeyaa iskudhafyo dheeraad ah.
Macluumaadka farsameed ee ku xusan buug-tilmaameedka "Tababarka"
Waxaa ku shaqeeya 220 V (50 Hz). Qalabka 12 kor u qaadida heerkulka heerkulka waxaa lagu quudiyaa iyada oo loo marayo qaab beddelid.
Isticmaalka tamarta waa 12, 40, 60 ama 65 W (iyadoo ku xiran nooca qalabka).
Xuduudaha xakamaynta heerkulka la ogol yahay: + 33 ... +43 ° C
Qalabka la oggol yahay ee dejinta heerkulku kama badna 0.2 ° C.
Miisaanka loo yaqaan 'incubator' wuxuu u dhexeeyaa 2 ilaa 6 kg.
Isbeddelka heerkulka heerkulka gudaha gudaha weelku kama badna 1 ° C.
Nooca xakameyaha heerkulka - digital ama analog.
Xaddiga qalabka casriga ee walxaha ceeryaanta waa 2-7 saacadood.
Faa'iido iyo tabaruc
Marka la barbardhigo isweydaarsiyada "Laying" oo leh qalabka analogga ah, faa'iidooyinka soo socda ayaa la kala saari karaa:
qiimaha macquulka ah;
cabbirka yar, miisaanka ugu hooseeya;
Heer sare ee rinjirta kuleylka.
Saamaynta wanaagsan ee ugu dambaysa waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in lakabka wax dhisidda ee ukunta "ukun" uu ka kooban yahay caag badan. Laakiin si sax ah ujeedadaas, qalabkani wuxuu leeyahay laba qaybood oo xun:
nuugista urka aan fiicnayn;
Waa muhiim! Dareemaha heerkulka waa in lagu dhajiyaa si gaaban marka la eego daboolida kulubka!
Si looga hortago qodobbada ugu horeysa, soo-saaruhu wuxuu ku baaqayaa in la isticmaalo wakiilada nadiifinta ka dib marka isticmaalka kasta isticmaalo.
Isla markiiba ka dib marka aad iibsanayso qalabka, waa in aan laga saarin oo la hubiyo hawlgalnimada iyo u hoggaansamida qaabka loo cayimay. Ka dibna gali qaybta jajaban ee hoose ee guryaha. Dheeraad ah, sida waafaqsan tilmaamaha, rakibo AUP (qalab gawaarida ah si loo soo rogo walxaha kulaylka) iyo daboolka.
Hadda qalabku wuxuu diyaar u yahay inuu shaqeeyo, talaabada xigta waxay noqon doontaa in ay isku xirto shabakadda 220 V. Taas ka dib, waxaynu qallajineynaa habka heerkulka qiimaha celceliska (agagaarka + 36 ... +38 ° C) oo sug ilaa 20-30 daqiiqo. Marka mashiinka baabuurta lagu dhexdhexaadiyo heerkulka la dhigay, tilmaamuhu waa uu iftiimayaa, taas oo muujin doonta in qalabku uu ku jiro qaabka ugu weyn ee hawlgalka. Hadda waxaad u baahan tahay inaad ku xirto awoodda bateriga, raacaya xeerarka kutaansashada (ha ilaawin inaad kala furfurto qalabka 220 V).
Haddii aad ku cusub tahay warshadaha digaaga, oo waligood waligaa horay loola xiriirin bur burinta, markaa waa inaad si taxadar leh u barataa tilmaamaha ku saabsan hirgelinta Qalabka Laying. Taas ka dib, waxaad bilaabi kartaa habka loo diyaariyo in lagu dhiso, taas oo ku lug leh hagaajinta xakameyn heerkulka, iyo sidoo kale xulashada iyo soo saarista ukunta.
Beddelidda heer-kuleylaha heerkulka ayaa ka dhacda dhowr marxaladood. Nidaamkaas oo kale, waa inaad isticmaashaa heerkulbeeg caafimaad. Marka hore hubi in heerkulbeeggaagu muujiyo xogta la aqbali karo (waxaad qaadan kartaa dhowr qaybood oo isbar bardhigi kartaa heerkulka jidhkaaga). Kadibna heerkulbeegga hoose ee hoose ee maskaxda ku dheji meel ay ka muuqato waxqabadka ay si fiican u arki doonaan.
Marka xigta, waxaad ubaahan tahay inaad u jeediso autoincubator ee 220 V-ga oo dejiya heerkulka xakamaynta heerkulka qiimaha la rabo (waxaa la doorbidi karaa in la sameeyo heerkulka kulaylka, taas oo ah +37.7 ° C). Sug ilaa 15-25 daqiiqo, marka calaamadda qalabku uu iftiimayo, kadib markaad u baahato inaad eegto tilmaamaha heerkulbeegga. Haddii farqiga u dhexeeya heerkulka iyo heerkulka la helay uu ka badan yahay 0.5 ° C, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbedelka heerkulka iyadoo la adeegsanayo mindhicirka heerkulka.
Ma taqaanaa? Wax soo saarka warshadaynta ee loo yaqaan 'autoincubators' ee USSR wuxuu bilaabmay 1928.
Ka dib marka heerkulka la rabo lagu dhigo qashin-qaboojiyaha, beddel heerkulbeegga caafimaadka adigoo la mid ah kan la keenayo qalabka. Isbarbardhigaan akhriska, iyo haddii ay jirto farqi iyaga ka mid ah, ka dibna u tixgelin hababka dheeraadka ah.
Isu ururi ukumo si aad u badan inta ugu macquulsan. Haddii aan isla markiiba laga saarin kaydinta, waxaa jira halis ah hypothermia (xilliga qaboobaha, gu'ga, dayrta) ama kulaylka (xagaaga). Ukunta cusbada leh waxaa lagu kaydiyaa meel gaar ah oo qalabaysan oo leh heerkul hawo + 8 ... + 12 ° C iyo qoyaan - 75-80%. Waa inaysan jirin wax qorshe ah iyo iftiin caadi ah ama ku-meel-gaar ah oo ku yaal aagga kaydinta.
Waxaad kaydin kartaa ukum ka hor inta aadan ku dhicin ilaa ugu badnaan 7 maalmood. Ukunta iyo digaaga goose waxaa lagu keydin karaa xaaladaha ugu fiican ilaa 8-10 maalmood. Waxaa muhiim ah in la fahmo in kaydinta sii dheeraynta horay loo sii ogaado xaqiiqda ah in sheyga waxyeelada leh uu bilaabi karo inuu ku dhex daro ukunta.
Akhri waxyaabaha ku saabsan digaagga barafka, goslings, poults turkey, shimbiraha, turkiga, shimbiraha guinea, shinbiraha.
Markaad dooranaysid ukunta, hubso in qaabka iyo xaaladaha qolofta ay sax yihiin. Waxyaabo xaddidan oo ku haboon xayawaanka dhalinyarada ah waa in ay leeyihiin dhar midaysan oo dhexdhexaad ah oo ah dhumuc dhexe iyo cufnaanta.
Waxaa suurtogal ah in la sameeyo falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan ukumaha si loo xakameeyo iyada oo la adeegsanayo baaritaan. Isticmaalka, waa lagama maarmaan in la doorto ukumaha leh qol hawada oo cabbirka caadiga ah. Intaa waxaa dheer, waa inay lahaadaan jaakad aan ku dhegsanayn qolofka, iyada oo si siman uxiran wareegyada.
Marnaba ma samaynayso habka neefsiga kaadida ah ka hor inta aanad soo saarin walxaha kulubka. Nidaamyada noocan oo kale ah waxay keeni doonaan xaqiiqda ah in bakteeriyada ama daroogada kale ay dusha ka gali doonaan qolofka iyo ukunta. Tani waxay horseedi doontaa xaqiiqda ah in farcankiisa aan marnaba hatch.
Waa muhiim! Haddii ay jirto heerkulka caadiga ah ee heerkulka ilaa 10 ° C ee qolka, ka dibna waxaad filaneysaa in heerkulka kuleylaha ilaa 1-2 ° C.
Ukumaha loo diyaariyey tabarka waa in labadaba lagu calaamadeeyaa calaamadaha "O" iyo "X". Tani waxay kaa caawineysaa inaad xakameyso xayawaanka oo aanad isku buuqsanayn. Ka dib marka la geliyo walxaha kuleelka, heerkulbeega ayaa la geliyay oo daboolka furan ayaa xiran.
Si loo helo geedi socodka taranka, waa in la raaco xeerarka soo socda:
Si joogto ah ula soco xaraarada heerkulka gudaha. Sidoo kale, ha iloobin inaad soo dhisto sahayda biyaha (haddii loo baahdo, kala fur qalabka laga soo saari karo caanaha hore).
Iska hubi in nidaamka AUP uusan shil galin oo ku dhicin walxaha kuleelka mar walba marxaladda mudada cayiman.
Marmarka qaarkood ukunta dhirbaaxada ku dheji. Kuwii derbiga ku dhowaa, waxay ku baddaleen kuwa ku sugnaa xarunta. Waa lagama maarmaan in la sameeyo tan, tan iyo gudaha nidaamka heerkulbeegga heerkulbeegga ee heerkulka guud ahaan (heerkulka, heerkulku wuxuu noqon karaa jajab ka sarreeya heerka sare ee geesaha). Xasuusnow in ay ka fiican tahay in aad ukumo ukunta, sababtoo ah markaad qaadeyso waad dhaawici kartaa unugyada embriyaha.
Laba maalmood ka hor dhamaadka qoraxda, ukumaha ukunta waa mamnuuc.
Inta lagu jiro xilliga kuleelka, waxaa lagama maarmaan ah in labajibaar lagu sameeyo horumarinta ukunta. Taas waxaa lagu sameeyaa caawinta qafiska iyo nalka korontada (150-200 W). Maalinta 7-8-aad, marka la baarayo ukunta iyadoo la adeegsanayo qoondheer, qadar yar oo madow waa inay ku muuqdaan jiirka. Maalinta 11-aad ee 13aad, ukunta oo idil waa inay noqotaa madow. Tilmaamahan ayaa ah calaamadaha horumarinta bayoolojiga caadiga ah ee chicks. Haddii ukumuhu iftiin ku yahay muuqaalka labaad, ka dibna tani waa "qof hadal ah", waa in laga saaraa kuleylaha.
Haddii lagu jiro howsha qalabka baabuurta, tamarta korontada lumay, markaa waa lagama maarmaan in la isticmaalo koronto dhaliyaha ama u wareejiyo qalabka meel diirran, oo ku daboolaya qalabka cufan.
Haddii baruur yar yar ay u jajabaan qolka qolka hore, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo heerkulka kuleylaha 0.5 ° C Iyada oo muuqaalka dambe ee kaydka dhalinyarada, heerkulku wuxuu kordhiyaa 0.5 ° C
Marka chicks ugu horeysa, waxay u baahan yihiin in lagu meeleeyo meel diiran (+37 ° C) ilaa 7-10 maalmood. Kuleylka waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo nalal.
Ka dib marka la dhamaystiro nidaamka kaadida, qalabka waa in si fiican loo dhaqaa oo loo kaydiyaa.
Fure u ah taranta taranka ee digaagga, goslings, ducklings, broilers, quusto iyo digaagaha mooska waa quudin ku habboon.
Xasuuso in qalabka casriga ah ee Incubus ay tahay qalab koronto oo farsamo, markaad isticmaalayso waa inaad raacdaa xeerar iyo taxadar:
Waa mamnuuc in la isticmaalo abrasives iyo xalalka loogu talagalay nadiifinta alaabta dhoobada iyo alaabta wax lagu nadiifiyo si loo nadiifiyo kulaylka.
Ha u ogolaanin wax xashiishad ah oo jirka ku jira habka kuleyliyaha.
Waa mamnuuc in la sameeyo culeys farsamo oo xooggan qalabka, sababtoo ah taasi waxay halis gelin kartaa jabitaannada xarkaha ama nidaamka cilladaysan, taasoo ka dhalatey dhibaatooyinka gaaban ama dhibaatooyinka kale ee la xidhiidha farsamooyinka.
Waa mamnuuc in la burburiyo habka loo yaqaan "incubator", kaas oo ku xiran shabakadda.
Ma taqaanaa? Horraantii 70aad ee qarnigii la soo dhaafay, in ka badan 1,7 bilyan oo ah autoincubators ayaa ku shaqeeya dhammaan USSR.
Qalabka autoincubator ee "Incubus autoincubator" waa qalab fiican oo loogu talagalay bilowga kuwa doonaya in ay jilaan carruurtooda. Qalabkani wuxuu karti u leeyahay in uu ka shaqeeyo ilaa 80% shaqada madax-bannaan, iyada oo aan wax-dhex-galin aadane ah lahayn. Intaa waxaa dheer, qiimaha ay sii kordheyso ayaa soo jiidata beeraleyda digaaga ah ee cusub.
Daryeelidda wakiil qosol leh ee reerka maranths - Calatea Medallion
Lohman Brown: sifooyinka, daryeelka, taranta
Waa maxay pylorosis (tafatir) ee digaaga oo ay tahay halis loogu talagalay dadka?
Waa maxay - foosha: sharaxaadaha botanical, guryaha faa'iido leh, cuntada sida caadiga ah
Daawada casriga ah ee caafimaadka xoolaha, antibiyootikadu waa mid ka mid ah kooxaha ugu caamsan ee walxaha bayolojiga firfircoon ee loo isticmaalo bini-aadanka. Muddo ka badan tobaneeyo sano, xeryahaani waxay ka caawiyeen in ay jilciyayaashu wax ka qabtaan cudurro badan, taas oo kordhinaysa maaha oo kaliya waxtarka beeraha, laakiin sidoo kale faa'idada beeraha xoolaha, oo ay ku jiraan lo'da taranta. Read More
Xannaanada oo loogu talagalay geedo leh gacmahooda - qashin-yar-yar
Taasina waa mid ka fiican: noocyada, sifooyinka